Mooshin xilka looga qaadayo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo haatan ka socda Baydhabo iyo Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Mooshin xilka looga qaadayo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo haatan ka socda Baydhabo iyo Muqdisho
Siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa haatan qorsheeynaya inay baarlamaanka maamulkaasi u gudbiyaan mooshin xilka looga qaaadayo madaxweynaha maamulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Dhamaan mas’uuliyiintaasi ayaa la sheegayaa inay ku kacsan yihiin madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxayna haatan bilaabeen diyaarinta mooshinkaasi ay ku doonayaan inay xilka kaga qaadaan Shariif Xasan.
Ololahaasi kacdoonka ah ayaa waxaa haatan kusoo biiray xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed, kuwaas oo si cad u sheegay inuusan Shariif Xasan sii ahaan karin madaxweynaha maamulkaasi.
Ilaa shan wasiir oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa haatan si cad u sheegay inay kasoo horjeedaan qaabka uu madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan wax ku maamulayo.
Mooshinkaasi ayay sheegeen inuu haatan socdo, islamarkaana uu yahay mid bilaw ah oo ay doonayaan inay horgeeyaan baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Lama oga sida ay suurta-galka u noqon doonto in xilligaan Shariif Xasan Sheekh Aadan mooshin xilka looga qaado, balse waxaa haatan Baydhaba iyo Muqdisho isku biirsaday kooxo ku kacsan Shariifka oo haatan ku howlan ololaha madaxweynaha xilka ka dhamaaday ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.